के तपाईसँग यो कम्पनीको सेयर छ ? जारी गर्दैछ ७६ प्रतिशत बोनस सेयर ! - Arthatantra.com
शीर्षकमा एउटै कम्पनीको ७६ प्रतिशत बोनस भन्ने बुझिन्छ । समाचारमा तीन वटा कम्पनीको जोडेर ७६ प्रतिशत पु¥याइन्छ । पाठकको क्लिक बढाउन मात्र यस्ता तोरिलाउने शीर्षक राख्न बन्द गरियोस् ।